Mari-nehupfumi, 19 Kukadzi 2019
Chipiri 19 Kukadzi 2019
Gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe, VaJohn Mangudya, mangwana vachaburitsa gwaro remashandiro avanotarisira kuita nyaya dzemari munyika, kana kuti Monetary Policy Statement.
Hurumende Inozivisa Vose Vakawirwa neTsaona muMigodhi kuKadoma
Hurumende yazivisa mazita evanhu vose makumi maviri nevana vakafa mutsaona yemumugodhi kuBattlefields kuKadoma mushure mekunge mvura yapinda mumigodhi miviri usiku hweChipiri svondo rapera.
Vamwe veMabhazi Voramba Kushanda neZUPCO neKusabhadharwa
Chirongwa chehurumende chekubatana nevemabhazi anotakura veruzhinji vachishanda nekambani yehurumende yemabhazi yeZimbabwe United Passenger Company, ZUPCO, chinonzi chinenge chingangowondomoka zvichitevera kubuda kunonzi kwave kuita vamwe vemabhazi muhurongwa uhwu.
Musangano weKimberly Process uri kutarisirwa kuitwa zvekare muNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations apo India iri kutora chigaro chekuva sachigaro ichitevedzerwa neRussia.
Vadzidzisi Vanoda Kusanganazve Nehurumende Kukurukura Nyaya Yemihoro Yavo
Sangano rinomiririra vadzidzisi, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ririkukurudzira vanhu nemasangano akasiya siyana kuti vaise ruoko rwavo pabepa richaendeswa kuhurumende richiiudza kuti rigadzirise zvichemo zvevadzidzisi, zvinosanganisa mari dzemuhoro nemashandiro avo.